Madagascar | atlante
Aoka ho tony…
NewsMada - 6 ore 12 min fa
Herinandro sisa ! Hotanterahina amin’ny herin’ny anio ny fifidianana filoham-pirenena, fihodinana faharoa. Ho alarobia tsy miverina io. Aoka anefa ho tony isika… Efa fantatra fa tsy hitovy avokoa ny safidin’ny tsirairay, eny hatramin’ny mpivady, namana, fianakaviana, mpiara-monina… Samy manana ny azy. Samy manana ny maharesy lahatra azy amin’ireo kandidà roa farany hiatrika ny famaranana. Aoka anefa […]
Beach soccer – «Can 2018»: nihintsana ny Barea de Madagascar
NewsMada - 6 ore 14 min fa
Tapitra hatreo ny lalan’ny Barea de Madagascar eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika (Can 2018), taranja beach soccer. Mbola resin’i Maraoka indray ny Malagasy, teo amin’ny fifanintsanana isam-bondrona. Lavon’ny Liona-n’i Atlas avy any Maraoka, tamin’ny isa 6 no ho 4, ny Barea de Madagascar, teo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika (Can 2018), taranja […]
IEM – Antsiranana: nahazo tohana ny mpanjono
NewsMada - 6 ore 15 min fa
« Isaorana ny mpanorina ny IEM, Rajoelina nijery anay vahoaka madinika aty lavitra aty. Zava-dehibe aminay izao fitsinjovana ny mpanjono madinika izao satria sady tsy afaka mamboly izahay nefa tsy afaka miompy. Fameloman-tenanay ny asa an-dranomasina noho ny tsy fisian’ny rano hanondraka ny tanimbary sy ny fambolena eto”, hoy ny solontenan’ny mpanjono sady raiamandreny ao Ramena […]
NewsMada - 6 ore 16 min fa
Nifampizaran’ny Minisiteran’ny fiarovam-pirenena (MDN) sy ny Jirama, ny amboara, tamin’ny « Jeux Corporatifs », nokarakarain’ny 3FB, sampana baolina kitra. Fihaonana, notanterahina ny asabotsy 8 sy ny alahady 9 desambra lasa teo, tao amin’ny kianja Hjra Ampefiloha. Anisan’ny nandrombahan’ny MDN, amboara ny teo amin’ny baolina kitra, nandreseny ny Jirama, tamin’ny isa tokana, 1 no ho 0. Toy izany […]
NewsMada - 6 ore 22 min fa
Hitohy hatrany ny oram-pahavaratra any amin’ny tapany atsimon’ny faritry ny ati-tany, mandritra ny herinandro, ary ho maina kokoa ny any amin’ny ilany atsinanana. Hisy fiakarany ny maripana ambony indrindra ny aty amin’ny faritra anatiny. Ho an’ny faritra sisa, tsy hisy fiovana firy. Ny maripana ambany eo anelanelan’ny 15 – 27°C ary ny maripana ambony ao […]
JCI Vohitr’Iarivo: avahana ny karazam-pako
Mitohy ny tetikasa Vohitra Maitso hataon’ny JCI Vohitr’Iarivo. Fitsinjarana ireo karazam-pako indray no hanentanany ireo sekoly sy orinasa maromaro ho fitandroana ny fahadiovan’ny tanàna. Miditra amin’ny dingana faharoa amin’ny fitadiavana vahaolana hanadiovana ny tanàna eto Antananarivo ny JCI Vohitr’Iarivo ao anatin’ilay tetikasa Vohitra Maitso. Miantsehatra eny amin’ny sekoly sy orinasa maromaro izy ireo mametraka toerana […]
GEMMA: hofanina amin’ny fampiasana « logiciel » ny mpampianatra matematika
NewsMada - 6 ore 23 min fa
Hanofana ireo mpampianatra taranja matematika ao anatin’ny fivondronan’ny mpampianatra matematika eto Madagasikara (GEMMA) ny tomponandraikitra amin’ity taom-pianarana vaovao ity momba ny fampiasana ny logiciel hampianarana ny taranja any an-dakilasy. Hatomboka amin’ireo efa mpikambana ao amin’ny GEMMA aloha ny fanofanana ety am-piandohana, hoy ny filohan’ny GEMMA, Ramahazosoa Irrish Parker. Manodidina ny 40 eo ho eo ny mpikambana […]
NewsMada - 6 ore 32 min fa
Anisan’ny fanomezan-danja lehibe ho an’ny tontolon’ny soratra ny « Cercle littéraire ». Hetsika fanao ao amin’ny Ivontoeran’ny Kolontsaina malagasy Antsahavola, isaky ny asabotsy faharoan’ny volana. Hofaranana ny 15 desambra, manomboka amin’ny 2 ora tolakandro, ity atrikasa ity, ho an’izao taona 2018 izao. Anisan’ny tafiditra ao anatin’ny fandaharam-potoana ny tafatafa sy fifanakalozan-kevitra ny amin’ny nahitan’ny mpanatrika sy ny […]
Manomboka ny jolay 2019: tsy azo ampiasaina intsony ny finday tsy misy IMEI
NewsMada - 6 ore 33 min fa
Nampahatsiahy ny lalàna (nivoaka ny fiandohan’ity taona ity) hiadiana amin’ny fampidirana finday hosoka ny Artec (Autorité de régulation des technologies de communication) sy ny fadintseranana, omaly, teny Alarobia. Navoaka ny volana janoary, tamin’ity taona ity, ny didy fandraràna ny fampidirana izany eto amintsika. Manomboka amin’ny jolay 2019, ho tapahina tanteraka ny tambajotra ary tsy ho […]
BFV-SG: tolotra manokana ho an’ny faran’ny taona
Manome tolotra manokana ny mpanjifa ny banky BFV-SG, hanamora ny fiatrehana ny fotoana samihafa amin’izao faran’ny taona 2018 izao. Nanomboka tamin’ity volana desambra ity izany, hatramin’ny 10 febroary 2019. Maro ny tolotra azo isafidianana, ao anatin’ny findramam-bola Soafeno. Toy ny Soafeno Maika, natao ho an’ny mila vola tampoka, na sendra tratry ny vonjitaitra. Eo koa […]
Mankalaza ny tsingerin-taony: marobe ny mpanakanto mirary soa an’i Wawa
NewsMada - 6 ore 34 min fa
12 desambra, manamarika ny tsingerin-taona nahaterahany, androany, i Wawa, mpanakanto tsy zovina na ampahafantarina ny maro intsony. Amin’izao andro lehibe izao, tsy vitsy ny mpanakanto, Malagasy sy vahiny niara-niasa taminy, naneho firarian-tsoa ho azy. Anisan’izany ry Rijade, Basta Lion, Mad Max, Toofan, Diamond Platnumz, Singuila, TNT, Serge Beynaud, Dadi Love, Odyai, Rak Roots, Tence Mena, […]
Tsy hita soritra ao anaty tetibolam-panjakana 2019 mihitsy ny fitsinjovana sy fanohanana ny orinasa eto an-toerana. Vao mainka hanondrotra ny hetran’ireo mpamokatra paraky sy ny vokatra avy aminy indray ny fanjakana. Dinihina eny amin’ny antenimieran-doholona, ankehitriny, ny Tetibolam-panjakana 2019. Rehefa tena zohina, azo adika fa tadiavin’ny fanjakana potehina ny indostria misehatra amin’ny vokatra paraky eto […]
Hiara-dia amin’ny « N°13 » ny miramila misotro ronono
NewsMada - 6 ore 37 min fa
Hampandany ny kandidà Rajoelina ny fikambanan’ireo miaramila sy zandary misotro ronono (AAM). « Isaorana ireo miaramila sy zandary ato amin’ny fikambanantsika nanatanteraka ny adidy napetraka tamin’izy ireo, ary ny fitokisana nasehonareo eo amin’ny fanohanana ny kandidà Rajoelina ; ka nahatafiditra azy eo amin’ny laharana voalohany » hoy ny filohany, Randrianasimanana Jean Solo, tetsy Andrefan’Ambohijanahary, afakomaly. Notsiahiviny […]
Sekoly fanofanana ho mpitsara sy mpirakidraharaha: nofoanana ny fifaninanana taona 2018-19
« Rehefa nisy ny fitarainana isan-karazany tonga teo anatrehako, nisy ny tatitra isan-karazany nanambara ny tsy fetezan-javatra maromaro teo anivon’izany fifaninanana izany: nampanao fanadihadiana nitarihin’ny Bureau de coordination du contrôle des juridictions et des l’etablissement pénitentiaires (BCCJEP) ny tenako. » Io ny fanazavan’ny minisitry Fitsarana, i Harimisa Noro Vololona, teny Anosy, omaly, momba ny fifaninanana fidirana amin’ny […]
Tsy fanarahan-dalàna: mpitsara folo no miakatra filankevi-pifehezana
NewsMada - 6 ore 38 min fa
« Tiako ny maneho aminareo, raha ny mpitsara no resahina, nandritra ny dimy volana naha eo ahy: hisy ny filankevi-pifehezana… Maharitra telo andro izany eo anivon’ny Filankevitra ambony momba ny mpitsara (CSM). Eo amin’ny folo eo ho eo ny mpitsara handalo izany filankevi-pifehezana izany. » Io ny nambaran’ny minisitry Fitsarana, i Harimisa Noro Vololona, teny Anosy, omaly, […]
Nitohy tany Brieville any Tsaratanana, Andilamena, Mahatsinjo sy Mangabe ao Maevatanàna ny fampielezan-kevitry ny kandidà Rajoelina, omaly. Mazava ny lahateniny momba ny hanarenana ny toekarena. “Amin’ny alalan’ny harentsika no hahafahana manavotra ny firenena. Manankarena isika ary mampidi-bola be nefa mahantra ny vahoaka eto Brieville. Ny ampahany betsaka amin’ny hetra azo amin’ny kraomita entina hanasoavana ny […]
NewsMada - 6 ore 40 min fa
Voasambotry ny polisy avy ao amin’ny kaomisaria Antaninandro, ny 10 desambra 2018 teny Ambodivona ny jiolahy roa raindahiny amin’ny fanendahana. Araka ny fanazavan’ny polisy, mpanendaka eny amin’iny faritra manodidina an’Ambodivona iny ary ireo mpivezivezy sy mpandeha eny amin’ny fiantsonan’ny taksiborosy no tena lasibatry ry zalahy amin’izany. Vao maraimbe sy amin’ny hariva no fotoana fanaovan’izy ireo […]
Saron’ny polisy ny telo tamin’ireo dahalo ampolony nikasa hanafika tao Maintirano. Afakomaly ireto malaso ireto no nifanehitra tamin’ny polisy. Fiaraha-miasa teo amin’ny fokonolona no nahafahan’ny polisy nisambotra azy ireo. Mbola hita tany amin’izy ireo ny basy fampiasan-dry zalahy rehefa manao ny asa ratsiny. Fantatra fa avy any Morafenobe ireto dahalo ireto ary nikasa hanao fanafihana […]
Fakana an-keriny: zanaka mpamboly 13 taona lasan’ny jiolahy, fa avotra ihany
NewsMada - 6 ore 41 min fa
Votsotra tsy nandoavam-bola na ariary aza ny 10 desambra teo, tamin’ny 4 ora hariva ny zazalahy nisy naka an-keriny tany Anjiajia, ny 9 desambra teo. Nifanampy nanara-dia ny zandary sy ny fokonolona nandritra ny alina tontolo, ka hita tany Ambovonkalanoro, ny toerana nieren’ireo mpaka an-keriny sy io zaza io. Tokony ho 25 km miala eo […]
Andim-pamantaran’ andro telo, ny alatsinany 10 desambra teo no nanaovana famotorana teo anivon’ny mpitsara zokiolona, nanao ny fanadihadiana lalina ireo 19 mianandahy mianaka voarohirohy tamin’ny fitsarambahoaka, nahafatesana polisy inspektera telo lahy, tao amin’ny tananan’ Ambodihazinina fokontany Mahatsara, kaominina ambanivohitra Ambatoharanana disitrikan’ i Fenoarivo atsinanana, ny 24 oktobra lasa teo. Nilatsaka ny fanapahan-kevitry ny mpitsara fa […]